Usole izidakamizwa odlwengule ingane (7) - Ilanga News
Home Izindaba Usole izidakamizwa odlwengule ingane (7)
Usole izidakamizwa odlwengule ingane (7)
Ubekhihla isililo enkantolo efunda inkondlo axolisa kuyo enganeni
UNICHOLAS Ninow ukhihle isililo exolisa enganeni eneminyaka ewu-7
eseDros restaurant ngonyaka odlule.
UKHIHLE isililo efunda inkondlo ayibhalele ingane (7) ayidlwengula ngonyaka odlule ezindlini zangasese zaseDros Restaurant, eSilverton, ePretoria, uNicholas Ninow (21), ngesikhathi kuqhubeka ukulalelwa kwesigwebo sakhe eNkantolo eNkulu yasePretoria
UNinow ufunde le nkondlo esebhokisini lofakazi njengoba bekuwusuku lokuqala lokulalelwa
kwesigwebo sakhe, ukase azicelele ukushaywa ngoswazi oluncane.
Uthi akazange akuhlele ukudlwengula ingane, kodwa kwaba yiphutha okumele aphile nalo impilo yakhe yonke ngoba le nto ngeke esakwazi ukuyishintsha.
“Engakwenza, ngakwenza ngiqhutshwa yizidakamizwa.
Ukumdlwengula kwaba yinto eyenzeke ngephutha, kangizange ngingene endlini yokuzikhulula yabesifazane ngoba ngifuna ukuyogila lesi senzo, kodwa ngangena ngoba ngifuna ukubhema izidakamizwa zami.
“Ngiyakhumbula ngihleli endlini yangasese yabesifazane ngidla izidakamizwa, kodwa
kangikhumbuli ngimlandela ngingena naye endlini yangasese,” kusho uNicholas.
Uthi isimo sakhe saqala ukuphuma esandleni emuva kokuyeka ukudla amaphilisi ayemsiza
ukuba kuphele ukuqalekela izidakamizwa ngoba engamsizi.
“Ngaqala ukusebenzisa isidakamizwa iCrystal meth ehlanganiswe ne-cat,’ kusho yena. Efunda le nkondlo ngemuva kokuphekwa ngemibuzo ngummeli wombuso, u-Adv Dorah Ngobeni, uNicholas uthe: “Ngiyaxolisa ngengakwenza kuwena, ngeke ngikusole uma ungakukholwa lokhu. Ngeke ngikusole futhi uma ungangixoleli ngengakwenza kuwena.
“Ngiyabazi ubuhlungu nokukuhlukumeza engakwenza kuwena, ngiyazi futhi ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyisela isikhathi emuva ngilungise izinto.
“Usuku nosuku ngiyazama ukuzixolela ngengakwenza kuwena nakwabanye engabahlukumeza phambilini, kodwa ngiyehluleka,” kusho uNinow efunda inkondlo elokhu esula izinyembezi. Uthi ekhula impilo yayinzima njengoba izidakamizwa waziqala eneminyaka ewu-13 ubudala, ezidla nonina.
Uthi ngesikhathi edlwengula le ngane, kwamfikela ukuthi wenza into okungafanele ayenze, kodwa waqhubeka ngoba umqondo wakhe wawukwesinye isimo ngenxa yezidakamizwa ayesezidlile.
“Ngakwenza ngangacabanga ngokuzokwenzeka emuva kwalokho, ngangingenazwelo, ngidiniwe ngigcwele nenzondo ngenxa yobunzima engangibhekene nabo empilweni,” kusho uNinow.
Ebuzwa ngu-Adv Ngobeni ukuthi yini ayezoyenza ehlukile ukuba wayengalawulwa yizidakamizwa, uthe wayengeke ayithinte ingane eneminyaka ewu-7.
Echazela inkantolo, uthe namanje usenayo inkinga yezidakamizwa, nangaphakathi ejele usazidla.
“Selokhu ngaboshwa, ngiyazisebenzisa ngoba bonke abantu bayazi ngecala lami futhi bayangihlukumeza.
Ngihlukunyezwa yiziboshwa nabo ojele. Ngisuke ngizama ukukhohlwa ngale nto uma ngidla
izidakamizwa,” kusho uNinow.
Akagcinanga ukubhala le nkondlo njengoba ekhiphe enye incwadi ayibhalele umndeni wesisulu, waphinda waxolisa kuninakhulu athi umkhulise kanzima.
Uxolise nasendodaneni yakhe nonina wayo. U-Adv Ngobeni utshele inkantolo ukuthi akazigqizi qakala izincwadi ezibhalwe nguNinow ngoba ziyimizamo yokuba athole uswazi oluncane uma esethola isigwebo sakhe.
U-Adv Ngobeni uthi uNinow akazisoli nhlobo ngakwenza.
Ukuphikile futhi ukuthi wayebuswa yizidakamizwa ngesikhathi edlwengula ingane
njengoba ezikhathini eziningi ubejwayele ukuzidla ehleli nentombi yakhe, kodwa angayihlukumezi, okukhombisa ukuthi noma esezidlile izidakamizwa, kodwa ingqondo isuke isasebenza. Icala liyaqhubeka.
Previous articleUzoqopha umlando enzela abafundi
Next articleUhlinzeka abantwana ngetiye namabhisikidi